एकपछि अर्को वि’वादमा फसिरहेकी राष्ट्रपतिले चालिन् अर्को यस्तो कदम, प्र’चण्ड, देउवा माधव नेपाल तनावमा ! (भिडियो हेर्नुहोस्) - Nepali in Australia
May 24, 2021 autherLeaveaComment on एकपछि अर्को वि’वादमा फसिरहेकी राष्ट्रपतिले चालिन् अर्को यस्तो कदम, प्र’चण्ड, देउवा माधव नेपाल तनावमा ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
हिमाली तथा उच्चपहाडी लेकमा पाइने बहुमूल्य प्राकृतिक जटिबुटी यार्सा गुम्बा संकलनको सिजन यो वर्ष पनि प्रभावित बनेको छ।
को*रोनाको दोश्रो भेरियन्ट समुदाय स्तरमा फैलिएपछि पछिल्लो समय यार्सा गुम्बा संकलनकार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मुस्ताङका उच्च लेकमा पाइने बहुमूल्य यार्सा गुम्बा संकलनकार्य विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण गतवर्ष पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
तर, को*रोना संक्रमण जोखिम क्रमशः नियन्त्रणमा आएपछि यसवर्ष मुस्ताङमा पर्यटकीय गतिविधिका साथै यार्सा गुम्बा संकलनकार्य पनि फुकुवा गरिएको थियो।
हरेक वर्ष वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म उच्च लेकमा यार्सा टिप्ने समय सुरु हुन्छ। यार्सा संकलन गर्न पाउने अनुमती अन्नपूर्ण संरक्षणक्षेत्र आयोजना (एक्याप) मातहतको संरक्षण व्यवस्थापन समितिले दिनेगर्छ। एक्याप अन्र्तगत गठित स्थानीय संरक्षण व्यवस्थापन समिति (सीएमसी)ले तोकिएको शुल्क लिएर व्यक्तिलाई यार्सा संकलनको पुर्जी दिनेगर्छ। मुस्ताङका लेंकमा यार्सा संकलनको पुर्जी चैत महिना देखिनै सुरु हुन्छ।
समुन्द्री सतहदेखि करिव ४ हजार मिटर अग्लो उचाईको उच्च लेकमा पाइने बहुमुल्य यार्सा पाइने गर्छ। मुस्ताङको कुञ्जो, लेते, कोवाङ, टुकुचे, मार्फा, जोमसोम, कागबेनी, झोङ, छुसाङ, मुक्तिनाथसहित उपल्लो मुस्ताङका दर्जनौं उच्च लेकमा बर्सेनी यार्सा संकलन गर्न स्थानीय बासिन्दा र जिल्ला बाहिर उल्लेख्य सर्वसाधारण मुस्ताङ आउने गर्छन्।